Degamada Waaberi:- Xiriirka kubada cagta iyo Garsoore Maxamed Soomaali waxay doonayeen in ay fashiliyaan Cayaaraha degmooyinka? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Degamada Waaberi:- Xiriirka kubada cagta iyo Garsoore Maxamed Soomaali waxay doonayeen in ay fashiliyaan Cayaaraha degmooyinka?
(09-09-2017) Mid ka mid ah Madaxada Olombikada degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir ayaa eedeyn dusha ka saaray Xiriirka kubada Cagta Soomaaliya isaga oo ku eedeeyey in ay doonayeen in fashiliyaan Cayaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir.
Qofkaan oo diidey in aan Saxaafada Magaciisa u adeegsano ayaa Shabakedda qalinkacayaaraha Tilifoon ugu sheegey in Cayaartii Finalka ahayd ee dhexmartay Waaberi iyo Hodan uu qaladaad aad u badan ka sameeyey Garsoorihii kulankaas oo lagu Magacaabo Maxamed Soomaali kaas oo ay sheegeen in ay Horay uga dacwoodeen in aan lagu soo qorin Cayaarta Finalka maadaama intii koobkaan socdey uu ka galay qalad muuqda.
Ninkaan u hadlay Degmada Waaberi ayaa intaa ku daray in Cayaar hada kahor ay dheeleen intii uu socdey koobkaan uu Maxamed Soomaali ka dhigay Rigoore qalad ah Roosana ka siiyey Cayaaryahan isla Markaana daraadiis loo ganaaxay Macalinkii degmada Waaberi ayna u sheegeen Xiriirka in aysan markale ku soo qorin Cayaara ay dheelayaan maadaama uu Ninkaas yahay mid si Gooni ah ula dagaashan degmadooda.
Sidoo kale Waxay degmada Waaberi sheegeen in Cayaartii Finalka ahayd ee Xalay uu ka dhigay demadooda Rigoore been ah hadana iyada oo aan qalad dhicin uu amray in lagu celiyo kaaga sii darane waxa uu bixiyey Roose aan ilaa hada Naloo sheegin waxa uu ku bixiyey Garsoorihii kulankii Xalay ayuu hadalkiisa kusii daray ruuxaan katirsan Gudiga Olombikada degmada Waaberi.
Waxaa kaloo jira in qofkaan waraysiga siiyey qalinkacayaaraha uu sheegay in ay jiraan dad degan degmada waaberi kana tirsan Xiriirka kubada Cagta Soomaaliya ay iyagu ahaayeen kuwa ka danbeeyey shirqoolka lala doonayey degmadooda kuwaas oo dagaal kala dhaxeeyo sida uu sheegey Maamulka degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir.
Waaberi ayaa 3-1 ku Garaacday dhigooda Hodan iyaga oo 10 Cayaaryahan ku dheeley inta badan Cayaartii Finalka ahayd ee xalay dhacay kaas oo ay daawadeen dadkii ugu badan ee Garoon soo gala mudooyinkii ugu danbeeyey Cayaaraha dalka Soomaaliya.